मिर्गौला दान गर्नेको आयु लामो हुन्छ « Loktantrapost
मिर्गौला दान गर्नेको आयु लामो हुन्छ
३ चैत्र २०७३, बिहीबार १८:२४
मिर्गाैला कस्तो रोग हो ?
मानव जीवनमा देखापर्ने धेरै रोगहरु मध्ये मिर्गौला रोग एक भयाभह रोग हो । तर, राज्य पक्षबाट प्रशस्त सुविधा भएको हुँदा यो रोग भयाभह भएता पनि बाँच्न सकिने बनेर आएको छ ।
के कारणबाट देखा पर्छ ?
वंशाणुगत भनौँ या मधुमेह, उच्च रक्तचाप, पथरी र डाक्टरको सल्लाह बेगर जथाभावी औषधि सेवन गर्दा पनि यो रोग लाग्न सक्छ । नेपालमा करिब ३ लाख व्यक्तिहरुमा कुनै कुनै किसिमको मिर्गौला रोग भेटिएको छ । वर्षेनी ३ हजार जनाको दुवै मिर्गौला फेल हुने गरेको अनुमान आएको छ । ती मध्येमा केहीको अकालमै मृत्यु हुने गरेको देखिन्छ ।
राज्यले मिर्गौला प्रत्यारोपण निःशुल्क गरेको हो ?
हामी निर्देशिका बनाउँदैछौँ । सम्भवतः चैत अन्तिमतिर या बैशाख पहिलो हप्ताबाट निःशुल्क शल्यक्रियासँगै आधा शुल्कमा औषधि वितरण गर्ने प्रक्रियामा जुट्छौँ । निर्देशिका बनाउने जिम्मा राज्यले मलाई प्रदान गरेको छ । म त्यसमा लागि परेको छु ।
त्यसो भए अब मिर्गौला रोगीहरु सहज रुपमा बाँच्न सक्छन् ?
अवश्य । मिर्गौला रोग लाग्यो भन्दैमा आत्तिनु पर्ने छैन । तर, रोग लागेका मान्छेले खानपिन र ध्यानमा मन लगाए त्यो मान्छे आनन्दले बाँच्न सक्ने छन् । दुवै मिर्गौला फेल भएकालाई पनि खानपिनमा पूरै ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । मिर्गौला पीडितलाई आफन्तले मिर्गौला दिए त्यो मान्छे आनन्दले २०÷३० वर्ष बाँच्न सक्छ । मिर्गौला प्रत्यारोपण गरेका मानिसहरु परेजमा बसे ३०÷४० वर्षसम्म बाँचेर व्यवसाय चलाउँदै आएको हामीले पाएका छौँ ।
मिर्गौला दिनेहरुको अवस्था चाँहि कस्तो पाउनु भएको छ ?
पीर मान्नु पर्र्दैन मिर्गौला दान गर्नेहरु । लामो समयसम्म बाँचेको हाम्रो रेकर्डमा छ । मिर्गौला दान गर्नेहरुको सम्पूर्ण शरीर चेकजाँच गरिने हुँदा त्यही अनुसारको औषधि उनलाई प्रदान गरिन्छ । त्यसले पनि शरीरमा देखिएका रोगहरुलाई निर्मूल पार्दै तन्दुरुस्त हुने काम हुन्छ । त्यसैले मिर्गौला दिँदैमा मरिहालिन्छ भन्ने छैन । हामी कतिखेर के हुन्छौँ थाहा हुन्न । तर, मिर्गौला दिनेहरुको भने सबैकुरा चेकजाँच हुने हुँदा दान गर्नेहरुको स्वास्थ्य अझ मजबुद भएर गएको हाम्रो रेकर्डमा छ ।
मिर्गौला रोगी र मिर्गौला दिने व्यक्तिले प्रत्यारोपण पछि कति समय औषधि सेवन गर्नुपर्ला ?
प्रत्यारोपण पछि ३ महिना आरामको जरुरी छ । त्यसपछि प्रत्यारोपण गर्नेलाई ४ महिना या ६ महिनाभित्र डाक्टरको सल्लाह अनुसार चेकजाँच गरिरहनु पर्दछ । दिनेले पनि २÷४ पटक चेकजाँच गर्नु जरुरी छ । त्यसपछि दिनेले भन्दा लिनेले २÷४ वर्ष औषधि सेवन गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसपछि मिर्गौलाले पूर्ण रुपमा काम गर्ने भएपछि त्यति धेरै औषधि सेवन गर्नु पर्दैन । तर, परेजमा चाँहि बस्न जरुरी छ ।
मोटोपना मिर्गौलाको समस्या हो ?
विश्वमा मोटोपन पनि समस्याकै रुपमा देखा पर्दै आएको छ । ती मध्ये २ देखि ७ गुणासम्म मिर्गौला फेल गराउने सम्भावना मोटोपनाले गर्दा हुन्छ ।
मानिसलाई मर्निङ वार्कको जरुरी छ । त्यसबाट पनि रोकथाम हुन सक्छ ?
रोग लाग्नबाट बचाउने अचुक उपाय मर्निङ वार्क नै हो । यसलाई ध्यान दिएर गरिए प्रेसर, मधुमेह, मानसिक र फ्याटिलिभर बढ्नबाट बचाउँछ । ती रोग लागेन भने मिर्गौलालाई केही हुँदैन ।
मिर्गौला रोगबाट बच्ने उपाय ?
धुम्रपान र मद्यपान साथै तारेका चिल्लो खानेकुराबाट टाढा रहनु जरुरी छ । प्रशस्त मात्रामा पानी पिउने, स्वस्थ मानिसले पनि सालमा १÷२ पटक स्वास्थ्य परीक्षण गराई रगत र पिसाबको परीक्षण गर्ने । यति गरिएमा रोग लाग्नबाट बच्न सकिन्छ ।
डायलाइसिस गर्दा रोगीलाई असर गर्छ कि गर्दैन ?
डायलाइसिसको तुलनामा प्रत्यारोपण निकै किफायती हुने तथा प्रत्यारोपित व्यक्तिहरु दीर्घायु हुने र उहाँहरुको जीवनस्तर उत्तम रहने हुन्छ । तत्काललाई भने डायलाइसिस ठीकै हुन जान्छ ।
मेचीमा डायलाइसिसको मेसिन छैन नि ?
हो । मेचीमा नभएकै कारण यो वर्षदेखि डायलाइसिसको मेसिन मेची अञ्चल अस्पतालमा जडान गर्दैछौँ । बजेट पनि छुट्टिएको छ केही महिनापछि मेचीमा डायलाइसिसको सुविधा हुनेछ । बरु डायलाइसिस गर्ने सीप सिक्ने भए भक्तपुरको मानव अङ्ग प्रत्यारोपण केन्द्रमा सम्पर्क गर्न हामी अनुरोध गर्दछौँ ।
पूर्वबाट यति लामो समय खर्चेर मिर्गौला रोग सम्बन्धी जिज्ञासा राख्दै म कहाँ आउनुभएकाले तपाईलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु । मेरा विचार आम नेपाली जनतामाझ पु¥याइदिनु भएकोमा समग्र पूर्वेली पत्रकारहरुमा आभार प्रकट गर्न चाहन्छु । नेपाल सरकारले प्रत्यारोपणको काम र रोगीहरुलाई जीवन्त राख्न मेरो पक्षबाट सक्दो सहयोग रहने छ । हामी बढी आत्तिएर, रोग लुकाएर अकालमा ज्यान फाल्छौँ । त्यसबाट बच्नको लागि खानपिनमा ध्यान दिऔँ । सरल जीवनशैली अपनाऔँ । बोझिलो दिमाग राखेर कहिल्यै नहिँडाँै । सकारात्मक सोच र आध्यात्मिक चिन्तनमा रमाऔँ । यही सन्देश दिन चाहन्छु ।